अहिले दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर दुई तिहाइ जनमत ल्यायो । सत्तामा भएको कांग्रेस पत्तासाव नै भयो । अहिले केपी ओलीको पार्टी र पुष्पकमल दाहालको पार्टीका साथै केही साना दलको मिलिजुलीमा सरकार चलाएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेका एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै आएका छन् । देशमा जहाँजहाँ जुन विभागबाट अत्यधिक मात्रामा पैसाको चलखेल हुन्छ, त्यो विभाग आफूमातहत राखेर मन्त्रालयलाई निष्क्रिय बनाए ।
कारण अनुसन्धान गर्ने जिम्मा अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतकै कर्मचारीले तर अन्तिम निर्णय दिने काम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले । किनकि जब मुद्दा पर्छ । अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीलाई गोप्य भेटेर कमिसनको थैलीले पूजा गरेपछि ओली सरकार खुसी भई सबै अनियमिकतालाई वैध बनाएर कारबाहीबाट जोगाउनकै लागि विभाग आफूमातहत राखे । त्यतिले पनि नपुगेर महिनामा दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेर व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गरे । त्यसबाट पनि कमिसन लिए । त्यसलगत्तै ओली सरकारले आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने चिनीको भन्सार दरमा वृद्धि गरी उनै चिनी तस्करीलाई सहयोग गरे । स्वदेशी चिनीको प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै चिनीको भन्सार दरमा सतप्रतिशत वृद्धि गरेर त्यहाँबाट पनि करोडौँ रुपैयाँको थैली सिरानी हालेर सुतिरहेको छ ओली सरकार ।
बंगलादेश र भारतबाट चोरी निकासी हँुदै आएको चिनीलाई नेपाली व्यापारीले गोदाममा थुपारेर महँगोमा बेच्ने नाटक भइरहेको थियो । लामो समयदेखि सो नाटकको मुख्य पात्र थिए व्यापारी तथा चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल । त्यस पात्रको इच्छालाई सफल बनाइदिए प्रधानमन्त्री ओलीले । चिनी व्यापारी अग्रवालले चिनी उद्योगसँग सङ्कलन गरेको रकमलाई जम्मा गरेर प्रधानमन्त्रीको कक्षमा कमिसनको थैली बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट चिनीको भन्सार दर वृद्धि गर्ने निर्णय गरे  । जसको असर उपभोक्तामा परेको छ । गुलियो चिनीमा ओली सरकार ढुबेपछि उपभोक्ता भने प्रतिकेजी एक सय तीन रुपैयाँमा खरिद गर्नु परेको छ । त्यसबापत प्रधानमन्त्री ओलीको भागमा करोडाँै उपभोक्ताको रगत चुसेर सङ्कलन गरेको रकमको थैली पुगेको छ । बंगलादेशबाट अवैधरुपमा चोरी निकासी भएको चिनीलाई अग्रवालजस्ता व्यापारीहरुले धमाधम नेपाली उत्पादनको नाममा चोरी निकासी गरेको चिनी महँगोमा बिक्री हँुदै आएको छ । सरकार सोबारे चुप छ । कमिसन खोर सरकारले जनतालाई दिएको यही उपहार हो अझ के के उपहार पाउन बाँकी छ ओली सरकारको ।
ओली सरकारको नेतृत्व हुदासाथ अवैध र कृत्रिम अभाव सुरु भयो । अनि आफूखुसी मूल्य तोकेर कालाबजारी हुने गरेको छ । सो गरेर करोडौँ रुपैयाँ कमाउन पल्केका व्यापारीहरु पछिल्लो समयमा भन्सार दरवृद्धि गरेर भारत र बंगलादेशबाट चोरीनिकासी गरी नेपाल भित्र्याएको चिनीलाई महँगोमा बिक्री गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारी लविङमा पुगेका व्यापारी सफल भएका छन्् । सरकार परिवर्तनसँगै भन्सार दरवृद्धि गर्न चिनी व्यवसायीहरु अहिले सिहरबारमा रन्थनिएर हिँडेका थिए । कमिसनको थैली पाउनासाथ ओली सरकारले भन्सार दरमा भारी वृद्धि गरेर गुन लगाएका छन् ।
व्यापारीहरुले उखु किसानलाई देखाउँदै आफ्नो इच्छा पूरा गरे अत्यधिक मात्रामा नाफा खाने उद्देश्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई साथ लिएर भन्सार दर वृद्धि गर्ने अन्तिम तयारी हँुदै गर्दा कांग्रेस नेतृत्व सरकारले सत्ता छोड्नु परेको थियो । सोही समयमा प्रतिवेदन तयार भए थियो त्यही प्रतिवेदनलाई सदर गरेर भन्सार दर वृद्धि गरियो, व्यापारीहरुले भन्सार दरवृद्धि गर्ने माग राखेपछि बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी १० रुपैयाँ वृद्धि भई खुद्रा मूल्य ९० रुपैयाँमा पुगेको थियो । अहिले वृद्धि नै गरेपछि १०३ रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ ।
पछिल्ला दुई वर्षदेखि बजारमा चिनीको मूल्यलाई लिएर निकै आलोचना भइरहँदा पनि व्यापारीहरुले मूल्य सिधै बढाउन नसक्ने भएपछि भन्सार दरवृद्धि गर्न दबाब दिँदै आए  । व्यापारीहरुले चिनीको उत्पादन लागत ७५ रुपैयाँ प्रतिकेजीको रहेको दाबी गरेको छ । तर, खुद्रामूल्य १०३ रुपैयाँमा बिक्री वितरण हँुदै आएको छ । आयातीत चिनी सस्तो भएपछि महँगोमा बिक्री गर्न ल्याएका व्यापारीहरुमा छट्पटी सुरु भएको छ ।
विदेशबाट आयात हुने चिनी प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँमा नेपाल आउने गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले चिनीको अनुमानित उत्पादन मूल्य प्रतिकेजी ६२ रुपैयाँ ५० पैसामा हुनुपर्छ भनिरहेको छ । त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र पाँच प्रतिशत मुनाफा राखेर बजारमा पठाउँदा ७३ रुपैयाँ ५६ पैसा पर्न जान्छ । तर, व्यापारीहरुले १०३ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री हँुदै आउँदा पनि किन उन्मुक्ति दिइएको छ सरकार ? समयमा उखु किसानसँग नउठाउने र मूल्यसमेत अहिलेसम्म नदिएको घटना अझै चलिरहेको अवस्थामा मागअनुुसारको चिनी उत्पादन गर्न नसक्ने चिनी उद्योगहरुले अधिकांश चिनी भारत र बंगलादेशबाट आयात गरेर नेपाली उत्पादनको लोगो टाँसेर महँगोमा बिक्री गरिंदै आएको छ ।
आफूहरुले ल्याएको चिनी सस्तोमा बेच्नुपर्ने भएपछि रातारात आयातीत चिनीमा भन्सार दर बढाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिँदै आएका छन् । चिनी उत्पादक संघका अनुसार नेपाल सबैभन्दा महँगोमा चिनी उत्पादन गर्ने मध्येको एउटा देश भएको भन्दै आएको छ । करिब एक लाख किसानले उखु खेती गरिरहेका छन् भने करिब २० लाख मेट्रिक टन उखु उत्पादन भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ११ अर्ब रुपैयाँको उखु किसानले बिक्री गरेका छन् । यस वर्ष एक लख ७५ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुने बताइएको छ । रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल प्रालिले भारतीय उखु सस्तो दाममा खरिद गरेर नेपाली उखु कृषकलाई मारमा पार्दा न सरकार बोल्न सकेको छ न चिनी उद्योगका अध्यक्ष अग्रवालले सुनेका छन् । उद्योगले एक त किसानलाई चलान दिन आलटाल गरेको छ । अर्कोतर्फ भारतबाट सस्तो मूल्यमा उखु किन्न थालेको उखु किसान संघर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष सहरुम राउत गद्दीको दुखेसो सरकारले सुन्नै चाहेको छैन । रिलायन्स चिनी मिलको अनियमितताको कारण साढे तीन हजार उखु कृषकलाई डुबे  । सो चिनी मिलले दलाल लगाएर प्रतिचलान एक हजार रुपैयाँमा असुली गर्न लागेको छ । चलान वितरणमा दलाल लगाएपछि वास्तविक किसानले निःशुल्क रुपमा पाउनुपर्ने चलानबाट वञ्चित बनेका हुन् ।
पर्सामा चार हजार बिघामा उखुखेती भएको र ४० प्रतिशत उखु किसानको खेतमै सुकेका छन् । चिनी मिलले भारतबाट छ लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु प्रतिक्विन्टल चार सयको दरमा खरिद गरी क्रसिंग गरिरहेको आरोप छ । नेपाली उखु किसानको उखु प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३१ रुपैयाँको दरमा खरिद गर्ने सम्झौता छ । रिलायन्सले पोखरिया, सबैठवा, विन्दवासिनी, मनहर्वा र मिलनचोक गरी पाँच ठाउँमा उखु सङ्कलन केन्द्र राखेको र सो ठाउँबाट नै भारतीय उखु खरिद गर्ने गरेको किसानले बताएका छन् ।
जहाँ गुलियो त्यहाँ कमिलाहरु झुम्मीने गरेको हामी सबैले देखेकै हो । तर, यहाँ कमिला है सरकारी कर्मचारीहरु, मन्त्री, पत्रकार झुमिएका छन् । देशका सबै जनतालाई एकनासको बनाउने सबै बराबर बनाउने नारा लिएर आन्दोलन गरी सत्तामा पुगेका नेताहरु कमाउ धन्धामा लागि केही व्यापारीको गुलियो कुरामा भुलेपछि आम उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । अहिलेमात्र हैन लामो समय भयो नेपालमा अधिकांश सामग्रीहरुको आयातले नै देशको दैनिकी चलेको छ । देशका जनतालाई महँगोमा अत्यावश्यक सामग्रीको बिक्री गरेर रातारात धनी बन्दै आएका केही टपरटुईयाँ व्यापारीको स्वास्र्थ पूरा गर्न र धनी बन्नका लागि देशलाई समृद्धि र आर्थिक विकास गर्नु गराउँछु भन्ने दलका उच्च नेताहरुकै कारण दैनिक रुपमा मूल्यवृद्धि गरी सामग्री बेच्दासमेत सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ । र कहिलेकाहीं ब्यंूझिएपछि भन्ने गरेको छ भ्रष्टचार, तस्करी र कालाबजारी गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्नु गराउनु यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भाषणमा प्रापः सुनिने बोली हो । भाषणमा क्रान्त्रिकारी गर्नेहरु कानमा तेल हालेर सुत्ने गरेकै कारण कालाबजारीहरुले उपभोक्ता ठगी गर्ने मौका पाएको हो । त्यो तेल पनि तिनै व्यापारीले दिएको कमिसनकै तेल हालेर सुतेका कारण अत्यावश्यक खाद्य पदार्थको मूल्य पछिल्लो समयमा अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएको छ । भारत र बंगलादेशबाट चोरीपैठारी गरेर नेपाल भित्र्याएका चिनीलाई नेपाली उत्पादन हो भन्दै महँगोमा बेच्चे काम अहिले शशि अग्रवालको नेतृत्वमा भएको भएको छ । सो प्रपच्चका मुख्य अभियुक्त हुन स्वघोषित संस्था नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष अग्रवाल । उनी नै हुन् नेपालमा चोरीपैठारी गरी ल्याएको चिनीलाई नेपाली उत्पादनको नाम दिँदै महँगोमा बेच्चे व्यापारी । उनी आफूलाई चिनी उद्योगीको रुपमा परिचय दिए पनि आखिर उनी चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याएको चिनीलाई आफ्नो गोदाममा राखी बिक्री गर्दै आएका व्यक्ति हुन् ।
अत्यधिक मात्रामा चिनी आयात गरेर गोदाम भरेपछि अकुत नाफा खानकै लागि पैसाको थैली बोकेर अग्रवाल सरकारी कार्यालय धाए  । उनीलगायत केही अन्य चिनी व्यापारीलाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रालयका सहसचिवसम्मलाई रिझाउन सफलसमेत भए । नेपालमा उदारीकरण, निजीकरण र बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने अर्थशास्त्रीदेखि निजी क्षेत्रलाई मनपरी मूल्यवृद्धि गरेर चरमशोषण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने व्यापारी र उद्योगपति एकातिर उभिएका छन् भने अर्कातिर, भोकानांगा चरम गरिबीमा दिन गुजारिरहेका बहुसंख्यक गरिब किसान तथा मजदुर वर्ग विरोधमा रहेका छन् ।
वर्षको अन्त्यमा कर छली गरेर न कर बुझाउँछन् त सस्तोमा सामान उपलब्ध गराउँछन् । मजदुर वर्गकै रगत–पसिनाबाट निस्किने अतिरिक्त श्रमशक्तिको शोषणले अर्बपतिसमेत बनेकाहरुकै योजनामा पछिल्लो समयमा आएर अत्यावश्यक सामग्रीको कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरी बिक्री वितरण भइरहँदा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जानसकेको छैन । सरकारले उद्योगीहरूको दबाबमा चिनी आयातमा भन्सार महसुल दर वृद्धि त गरेर तर खुद्रा चिनीको मूल्य वृद्धिलाई रोक्न सक्ने शक्ति ओली सरकारसँग छैन । उद्योगीहरूले भन्सार शुल्क १५ बाट ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने भन्दै दबाब दिएका थिए व्यापारीहरुले । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले चिनी आयातमा भन्सार दर वृद्धि गर्दा सर्वसाधारण महँगीको मारमा परेको जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्रसमेत दर्ता गराए । तर, कुनै कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार छैन माग पत्रको बारेमा । राजधानीमा चिनी व्यापारीहरुले उपभोक्तासँग ठगी गर्न पाउनुपर्छ भन्दै बानेश्वरको इन्द्रेणी कम्प्लेक्समा पत्रकार सम्मेलन नै गरे । सो मागसंँगै शेरबहादुर देउवा सरकार सत्ताबाट हटेपछि केही साम्य भएको भन्सार दर वृद्धिको फण्डा अहिले केपी ओली सरकारले पूरा गरेको छ ।
तर, मञ्चले उद्योगीहरूको मागअनुसार आयात शुल्क वृद्धि गर्दा सर्वसाधारणको टाउकोमा महँगीको भार थपिनुका साथै चिनीको कालोबजारी हुनेसमेत हुने समेत जनाउँदै आएको छ । गलत उद्देश्य राखी उद्योगीले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि सरकारलाई दबाब दिँदा महसुल बढाउँदा बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव र मूल्य वृद्धि भइसकेको छ । चिनी उत्पादक संघले चिनीको बजार मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार र छिमेकी मुलुक भारतमा समेत निकै तल झरेको अवस्थामा स्वदेशी उद्योगलाई टिकाइराख्न चिनीको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने कृषि, आपूर्ति, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन बनाएको थियो । कृषि मन्त्रालयले ५० प्रतिशतमा पु¥याउन सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय गरी आपूर्तिसहित वाणिज्य मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत गराइसकेको थियो । अन्त्यमा ३० प्रतिशत भन्सार दरवृद्धि गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई देखाएर संघले यो वर्ष स्वदेशी किसानको उखुको मूल्य तोकेको छैन । यसरी उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी कृषि विकास मन्त्रालयले चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल ५० बढाउन सिफारिस गरेसँगै व्यापारीहरुले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पटकपटक भेटी मोटो थैली बोकेर कार्यकक्ष पुगेका थिए । सो थैलीका बारेमा अग्रवालले ‘ब्रिफ्रिङ’ गरेसँगै अर्थमन्त्री खतिवडा पनि तयार भए भन्सार दर वृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । मन्त्रीकै आज्ञा पाएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पनि कमिशनको प्रतिशत तय गरेसँगै ३० प्रतिशत वृद्धि गर्ने तयारी भएको छ ।
चिनी तस्करकै रुपमा परिचय बनाएका संघका अध्यक्ष अग्रवाल लागि रहेका छन् । उनीले भन्सार दर वृद्धि गर्न सकेमा सोही दरलाई आधार बनाएर चिनीको मूल्य वृद्धि गरी करोडाँै रुपैयाँ नाफा खाने र देशलाई एक पैसा कर नबुझाउने तयारी समेत अग्रवालको रहेको छ । सरकारले चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाए चिनी उद्योगीले आफ्नो उत्पादन महँगोमा बेच्न पाउने भएकाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आयातीत चिनीको बिक्री गर्ने भित्री योजनासमेत रहेको आरोप अन्य व्यापारीहरुको रहेको छ । उद्योगीले २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा राखेर चिनी बेच्दै आएको उनले बताए । उद्योगले तय गरेको मुल्य र उत्पादन लागतको विषयमा आपूर्ति व्यवस्था विभागका उप–सचिव निरज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले उद्योगीले धेरै नाफा खाएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । उद्योगीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदन नै लुकाइएको छ ।
हचुवाको भरमा भन्सार महसुल बढाउन नहुने, बजार विश्लेषण गरेपछि के गर्ने भन्ने निर्णय लिनु उचित हुँदैन । चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले न्यून भन्सार दरमा ५० हजार टन चिनी आयात गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई अनुमति दिने गरेको छ । दुई–चारवटा चिनी उद्योगको मागका आधारमा महसुल बढाउन नहुने कर्पोरेसनको भनाइ रहेको छ । अचेल चिनी खुद्रा किलोको ९० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । यो वर्ष आयात गर्ने लक्ष्य रहेको ५० हजार टनमध्ये ३७ हजार पाँच सय टन चिनी आयात भइसकेको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपाल चिनी उद्योगी संघका अध्यक्ष अग्रवाल र केही व्यापारीको मिलिमतोमा महसुल बढाउन लगे । यसैबीच, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष एवम पूर्वसांसद् पवनकुमार शारडाले चिनीमा भन्सार दर नबढाउन आग्रह गरे पनि सरकार भने ३० प्रतिशत बढाएको छ । नेपालमा भन्सार महसुल बढाएर चिनी महँगो पार्ने बित्तिकै भारतबाट धमाधम अवैध पैठारी हुनथाल्ने अध्यक्ष शारडाको भनाइ रहेको छ । चिनी उत्पादक संघको दबाबमा कृषि विकास मन्त्रालयले चिनीको भन्सार महसुललाई ५० प्रतिशत गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । यसो गरेमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलोग्राम १५ रुपैयाँले वृद्धि हुनेछ । यसरी चिनीमा खेलिएको खेलमा आफूलाई वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार भन्न रुचाउनेहरु भने मूल्य वृद्धिको पक्षमा उभिए । ब्यानर समाचार लेखेर केही व्यापारीको स्वास्र्थ पूरा पहिला गर्ने अनि पछि लामो समय सोही कार्यको ब्याज खाने तयारीमा लागेका हाम्रा पत्रकारहरुसमेत पछिल्लो समय गैरपत्रकारितामा डुब्न थालेको प्रस्ट भएको छ ।